हेलिकप्टरबाट काठमाडौं ल्याउदा पनि बचाउन सकिएन कोरोना संक्रमित अधिकारीलाई ! – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसमाचारहेलिकप्टरबाट काठमाडौं ल्याउदा पनि बचाउन सकिएन कोरोना संक्रमित अधिकारीलाई !
हाल फरक पेशमा भएपनि पत्रकारिता क्षेत्रमा आवद्ध थिए ।यसअघि दाङकै एक स्वास्थ्यकर्मीको पनि संक्रमणका कारण सोमबार नि’धन भएको थियो । २० वर्षीय अनिसा ओलीको उपचारका लागि अस्पताल चहार्दा च’हार्दै नि’धन भएको थियो । अनिसा आफै स्वास्थ्यकर्मी पनि थिइन् ।